စိတ်ကူးပုံရိပ်: October 2008
သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ခံစားခြင်း
ကျုပ်ရှေ့မှာ မြစ်တစ်စင်း ဖြတ်စီးဆင်း နေတယ်။ ကမ်းပါးပေါ်မှာ ရပ်ရင်းနဲ့ ကျုပ်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ မြစ်ဟာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ငြိမ့်ငြိမ့်လေး စီးနေလေရဲ့။ မြစ်ရေပြင်ပေါ်မှာ စိမ်းစိုနေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ချို့ အရိပ်တွေ၊ အရိပ်တွေ….။ အို…. ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ….။ ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်စိတ်ထဲ စိတ်ရိုင်းတွေ ၀င်လာတယ်။ မြစ်ကို လှိုင်းတံပိုးတွေ ထန်လာအောင် အမိန့်ပေးချင်လာတယ်။ ကျုပ်စိတ်တွေ ဆူဝေလာတယ်။ ကျုပ်ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဘာမဆို ဖြစ်ရမယ်။ ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ်။ ကျုပ် အမိန့်တွေ ပေးလိုက်တယ်။ မြစ်ရေပြင်မှာ လှိုင်းတွေ ထန်စေ…………။ လှိုင်းတွေ ထန်စေ…..။ လှိုင်းတွေ ထန်စေ……..။ အမိန့်ပေးရင်းနဲ့ ကျုပ်မောဟိုက် လာတယ်။ အို…..မြစ်ကတော့ ငြိမ်နေဆဲ ပါလား။ သစ်ရွက်တွေကတော့ သာသာလေးပဲ လှုပ်ခတ်နေလေရဲ့။ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်လေ၊ ကျုပ် ဒေါသထွက်လေပဲ။ နောက်ထပ် တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ၊ သုံးခါ….. ကြိုးစား ကြည့်တယ်။ နောက်ဆုံး ကျုပ်မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျုပ် ငိုမိတယ် ထင်တယ်။ ရှိုက်ရှိုက်ပြီး ငိုမိတယ် ထင်တယ်။
အင်း…. ကျုပ်ဟာ တစ်ချိန်က ပင်လယ်တွေကိုတောင် အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ တန်ခိုးရှင်ပဲ။ ကျုပ်ရဲ့ ခြေဖ၀ါးအောက်မှာ လိမ့်လိမ့်ပြီး တက်လာတဲ့ လှိုင်းလုံးတွေကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လှိုင်းလုံးတွေဟာ အိမ်တွေကို၊ သစ်ပင်တွေကို၊ လှေတွေကို ၀ါးမျိုသွားခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ကျုပ်အမိန့်ရဲ့ စွမ်းအားကို ကျုပ်ကျေနပ် ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျုပ်ရယ်သံတွေ လွှမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ လောကကြီးမှာ ကျုပ်ရဲ့ အမိန့်တည်စေရမယ်….။ အဲသလို ကြွေးကြော်ဖူးခဲ့တယ်။
ခုတော့… ကျုပ်ကို လူတွေက အရူးတဲ့။ ကျုပ်အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြရင် တချို့ကလည်း ရယ်ပြီး ထွက်သွားကြတယ်။ တချို့ကလည်း ကျုပ်ကို ပြန်ပြောသွားကြတယ်။ တံမြက်စည်းလှည်း မှာသာ လှည်းစမ်း ပါဗျာ တဲ့။ ကျုပ်ဟာ ခုတော့လည်း လမ်းတွေပေါ်မှာ တံမြက်စည်းလှည်းတဲ့ လူကြီးပေါ့။ ဒီလမ်းတွေကို တချိန်က ကျုပ်ပိုင်ဖူးခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျုပ်ကျိန်တွယ် ပြောလည်း မယုံဘူး။
ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာ ကျုပ်က မှောင်စေချင်တယ်ဆို မှောင်ရတယ်။ လင်းစေချင်တယ်ဆို လင်းရတယ်။ နေ့တွေ ညတွေကို ကျုပ်ဖန်တီးတယ်။ ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာ လျှောက်စေချင်တဲ့ လူတွေသာ လျှောက်ရမယ်။ မလျှောက်စေချင်တဲ့ သူများဟာ အရိပ်တောင် သီခွင့်မရှိဘူး။ ကျုပ်သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ပဲ။
လူတွေက ပြောကြတယ်….။ ကျုပ်ဒီအာဏာတွေကို ရဖို့အတွက် အတားအဆီးတွေ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ တံခါးတွေကို ရိုက်ချိုးခဲ့ရတယ်။ အဲ…စည်းတွေ အားလုံးကိုလည်း ချိုးဖောက်ခဲ့ရတယ်။ မျက်ရည်တွေ၊ ငိုသံတွေကို နင်းခြေပြီး ကျုပ်တက်ခဲ့တယ်။ လှေကားတွေကို တစ်လှမ်းချင်း တက်ခဲ့တယ်။ အမြင့်ကို ကျုပ်မက်မော လာတယ်။ မြင့်လေ မက်မောလေပဲ။ မြင့်လေ… ငိုသံတွေကို မကြားရတော့လေပဲ။ မကြားချင်ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းတွေ မကြားချင်ဘူး။ ကျုပ်အတွက် ကျုပ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ တန်ခိုး အာဏာတွေကို ဘာနဲ့ပဲ လဲရလဲရ။
ပိုးဖဲ ကတ္တီပါတွေ ရှိတယ်။ ကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေ ရှိတယ်။ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ရှိတယ်။ အစားအသောက်ကောင်းတွေ ရှိတယ်။ ကျုပ်မျက်နှာကို အားလုံးဟာ မော်မကြည့်ရဲဘူး။ ဘုရင်ကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကျုပ်နားမှာ ချိုမြလို့။ ကျုပ်ရဲ့ ရန်သူမှန်သမျှ ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ ကျုပ်စကားတစ်လုံးနဲ့ သူတို့ဟာ ကွယ်ပျောက် ကုန်ကြတယ်။ လူတွေဟာ ကျုပ်ကို ပိုပြီး ရွံ့လာကြတယ်။
ဘာသာရေးကို နာမည်တပ်လို့ ကျုပ်အာဏာကို ဖြန့်ကျက်ခဲ့တယ်။ ငရဲရောက်မယ့် လူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ အတွက် လူ့အသက်အချို့ ကျုပ်အမိန့်နဲ့ သတ်ခဲ့တယ်။ ကျုပ်စကား တစ်ခွန်းအောက်မှာ စစ်မီးတွေ လောင်ခဲ့တယ်။ မဆုံးနိုင်အောင် လောင်မြိုက်ခဲ့တယ်။ ငရဲကျမယ့် လူတွေရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီး ကျုပ်ဟာ နတ်ပြည်တော့ ရောက်လိမ့်မယ် မထင်ဘူးတဲ့ အချို့ လူတွေက ဝေဖန်ကြတယ်။
ကျုပ်မေ့ထား ခဲ့တယ်။ မတည်မြဲခြင်းတွေကို မေ့ထားခဲ့တယ်။ အလှည့် အပြောင်းတွေကို မေ့ထားခဲ့တယ်။
မဆုံးနိုင်တဲ့ နေ့တွေထဲ တစ်ယောက်တည်း နှိုးထလာရင်း…..
တချိန်က ပိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းများကို လှည်းကျင်း သုတ်သင်ရင်း…
သဲပေါ်ဆောက်ထားတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ရဲတိုက်ကြီးကို ငေးရင်း….
နတ်ပြည်က တံခါးမှူးရဲ့ ခေါ်သံကို (မမျှော်လင့်ရဲ သော်လည်း) တောင့်တရင်း…..
သစ္စာတရား၊ အမှန်တရား မရှိခဲ့တဲ့ ကျုပ်ရဲ့ခေတ်…..ခေတ်ကို လွမ်းမောနေမိနေလေရဲ့။ ကျုပ်ကို မေ့သွားကြ ပြီလား။ ကျုပ်ရဲ့ အရေးပါမှုကို မေ့သွားကြပြီလား။ သက်တော်ရာကျော်ရှည် ပါစေတဲ့လား…..။ ခုတော့ အဆုံးမရှိခြင်းဟာ ဆုတောင်းပြည့်မှု တစ်ခုလား၊ ဒုက္ခတစ်ခုလား။
မြစ်ကတော့ ငြိမ်နေဆဲ။ စီးဆင်းနေဆဲ။ အားလုံးကို မသိကျိုးကျွန် ပြုလျက် စီးဆင်းနေဆဲ…..။
(Cold Play ရဲ့ Viva la Vida ဆိုတဲ့သီချင်းကို ခံစားပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ရေးပါသည်။)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:034comments:
Labels: ရသစာ, အခြား
လေညှင်းလေး တစ်ချက် သုတ်သွားတယ်…
ရင်အုပ် အနီလေးနဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင် ကိုတွေ့တယ်…
ဒါတွေအားလုံးဟာ ချစ်စရာချည်း ပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည် သက်ရှိ သက်မဲ့ လောက အရာမှန်သမျှမှာ ချစ်တတ်ရင် ချစ်စရာတွေချည်း ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချစ်ရဲ့ ရှေ့မှာ နာမ၀ိသေသန မျိုးစုံ ပါလာတတ်တယ်။
ထူးအိမ်သင် ကတော့ အကြောင်းပြချက်များ မလိုဘူးတဲ့။ စိုင်းထီးဆိုင် ကတော့ ချစ်၍ စွန့်သွားတဲ့ မင်းကို စွန့်၍ ချစ်သွားမယ် တဲ့။ အဲဒီထဲမှာ (ဒေါ်)ကြည်အေး ပြောတဲ့ စာကြောင်းလေးကို အစွဲဆုံးပဲ။ အချစ်၌ အတ္တများစွာ ပါလေသည် တဲ့။ အတ္တကြီးတဲ့ အချစ်နဲ့ အတ္တသေးတဲ့ အချစ်ရယ်လို့ပဲ ကွဲမှာပေါ့။ အချစ်ဆိုရင် အတ္တပါလေတယ်လို့တော့ ပုံရိပ် အတွေ့အကြုံ အရ ဆိုရမှာပါ။ ပုံရိပ် မသိသေးတဲ့ အချစ်တွေလည်း ရှိဦးမှာ ပေါ့လေ။ အဲဒီတော့ ပုံရိပ်လည်း မပြောတတ်တော့ဘူး… မပြောအပ်တော့ဘူး…..။ မတန်ခူးက tag လာတယ် အချစ်အကြောင်း ဆိုလို့အရင်ကတည်း ရေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ၀တ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို ကိုက်ညီမယ်ထင်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြောတော့ဘူးနော်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ကြပါကုန်….။ ရေးစရာမရှိတုန်း ရေးစရာ အကြောင်းအရာ ရှာပေးတဲ့ မတန်ခူးကို ကျေးဇူးပါ။
နှင်းတို့ ဝေနေသည်။ ၀ိုးတ၀ါးသာ မြင်နေရသော်လည်း ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကြာ လျှောက်ခဲ့သောလမ်းကို မမှားချင်တော့ပါ။ တိတ်ဆိတ်လွန်းသည်မို့ ကိုယ့်ခြေသံကို ကိုယ်ပြန်ကြားနေရသည်။ သီ့နားထဲမှာ နောက်ခြေသံတစ်ခု လိုနေသေးသလို။ မီးခိုးနံ့သင်းလာပြီမို့ အကြော်ဆိုင်နှင့်နီးပြီဟု သီသိလိုက်သည်။ အကြော်ဖိုမှ မီးတောက်သံကိုလည်း ကြားနေရပြီ။
“အဒေါ် ဘူးသီးကြော် တစ်ပွဲပေးပါနော်။”
အသင့်ချထသော ခုံပုလေးများမှာ နှင်းများစိုနေနှင့်ပြီ။ နှင်းစက်တွေကို သုတ်ရန် အ၀တ်တစ်ခု တောင်းရပေဦးမည်။ သီပြန်ရောက်တော့…
သီထိုင်မည့်ခုံမှာ အရင်တုန်းကလို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းလျက်။ ပြီးတော့ သီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရပ်လျက်။ ဖိုးညီ….။ နှင်းများ ပိတ်ဆိုင်းနေသော်လည်း သီမြင်နိုင်ပါသည်။ သူ့မျက်လုံးများကို သီမြင်ရသည်။ အံ့သြခြင်းလား၊ ၀မ်းသာခြင်းလား၊ ၀မ်းနည်းခြင်းလား။ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကိုလား။ သီမြင်နေရသည်။
“ထိုင်လေ… သီ။ ငါသုတ်ပေး ထားတယ်။”
သူ့လက်ထဲမှာ လက်ကိုင်ပ၀ါ အကွက်လေးတစ်ထည်။ ဟိုတုန်းကလိုပဲ။ ခုနစ်နှစ်။ ခုနစ်နှစ်ဆိုသည့် အချိန်က လူတစ်ယောက်ကို မေ့နိုင်လောက်အောင် ကြာခဲ့ပြီလာ့း…။ ဖိုးညီ…။ သီ အိပ်မက်မက်နေသူ တစ်ယောက်လို ထိုင်ချလိုက်သည်။
“နောက်တစ်ပွဲချ ပေးရဦး မလား တူမကြီး။”
အကြော်သည် အဒေါ်ကြီးက လာမေးသည်ကို လက်ကာပြလိုက် ရသည်။
“မတွေ့တာ ကြာပြီနော်၊ နေကောင်းလား သီ။”
သူ့ရဲ့ အူကြောင်ကြောင် စကားအဆုံးမှာ သီ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။ မတွေ့တာ ကြာပြီတဲ့လား။ ငါ့ဘ၀ထဲမှာ နင်မရှိတော့အောင်ကို မတွေ့တာ ကြာပြီနော်။ မတွေ့အောင်ရှောင်ခဲ့တဲ့သူက မတွေ့တာ ကြာပြီနော်လို့ နှုတ်ဆက်တာ ငါဘာပြန်ပြောရမလဲ။
ဟိုးခုနစ်နှစ်ဆီတုန်းက နင်တိတ်တိတ်လေး ငါ့ဘ၀ထဲက ထွက်သွားတော့ ခုလို အချိန်ပဲ။ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။ ရန်ကုန်ကို မနေ့ကပဲ ထွက်သွားတယ်လေ…. သမီးကို နှုတ်ဆက် မသွားဘူးလား….ဆိုတဲ့ နင့်အမေရဲ့ ပြောစကားကြောင့်ပဲ နင်ဘယ်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိခဲ့တာပါ။ နှုတ်တောင်ဆက် မသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိပ်စာကို ငါလိုချင် ပေမယ့် မတောင်းခဲ့ဘူး သိလား။ တချိန်တုန်းက ဆယ့်ရှစ်နှစ် အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒေါသတွေဟာ ခုတော့လည်း ရယ်စရာပါ။
“နင့်ကို ငါလာရှာတာ သီ။”
စကားပလ္လင် ခံခြင်းမရှိသော သူ့စကားကြောင့် သီ မျှော်လင့်ထားသလို ပျော်ရွှင်သွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
“နင် ငါ့ကို မတွေ့ချင် တော့ဘူးလား သီ။”
“တွေ့ချင်ပါတယ်။ ငါ ဆယ့်ရှစ်နှစ်လုံး ပေါင်းလာ ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့် မတွေ့ချင် ရမှာလဲ။ ငါ့ကို သက်သက်လာရှာတယ် ဆိုတာကိုသာ ထူးဆန်းနေတယ်။”
“ဟုတ်တယ် နင့်ကိုငါ သက်သက်လာရှာတာပဲ။”
သူ့မျက်လုံးများကို ကြည့်ရင်း သီတစ်ခုခုကို သိလိုက်သလို…။ ဟင့်အင်း…သူပြောမည့် စကားများကို သီမကြားရဲပါ။ သူလည်း မပြောသင့်တော့ပါ။ သီ့တစ်ကိုယ်လုံး ခွန်အားတွေ မရှိတော့ သလိုပဲ။ ရှိတဲ့ အင်အားအကုန်စု၍ သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်။
“ငါ လက်ထပ်တော့မယ် ဖိုးညီ။”
တိုးတိုးသာ ရေရွတ်မိသော်လည်း သီ့စကားက သူ့ကိုတုန်လှုပ်သွားစေသည်။ သူ့မျက်ဝန်းများ ချက်ချင်း အရောင်ပြောင်းသွားသည်ကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သေး၏။ ဟုတ်တယ် ဖိုးညီ။ ငါလက်ထပ်တော့မယ်။ အဲဒီစကားကို ကြားရင် နင့်မျက်နှာ ဘယ်လိုနေမလဲလို့ ငါခဏခဏ တွေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့ ငါတွေ့နေရ ပြီလေ။ နင့်မျက်နှာ ဘယ်လိုနေလဲ။ ငါတွေ့နေ ရပြီ။ စိတ်ထဲကနေ သီဆက်ပြောနေမိသော်လည်း တကယ်တော့ ထင်သလောက် ပျော်ရွှင်ထိရှ သွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြမိသည်။ မောင်…. မောင့်ကိုပဲ သီချစ်ခဲ့တာပါ။
သီ့ဆန္ဒကို အမြဲ ဦးစားပေးခဲ့တဲ့မောင်၊ နူးညံ့ပြီး လိုက်လျော အလျော့ ပေးခဲ့တဲ့ မောင်။ တခါတရံမာကြောတတ်တဲ့ သီ့ရဲ့ မာနတွေ အရည်ပျော်ကျ ရသည်အထိ မာနမရှိတဲ့ မောင်။ ငါဟာ မောင့်ကို သူများတွေနဲ့ ယှဉ်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာလား ဆိုတာတော့ ငါမသိဘူး ဖိုးညီ။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဘ၀မှာ မောင့်ရဲ့ အချစ်က ငြိမ်းချမ်းစေတယ်။ မောင့်လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ရတဲ့ အခါ လုံခြုံမှုတစ်ခုကို ခံစားရတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ငါမက်မော သလားတော့ မသိဘူး။ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်ရတတ်တဲ့ အမျိုးပဲလား ဖိုးညီ။
စက္ကန့်ပေါင်းများစွာ ကြာသွားခဲ့သည်။ ဖိုးညီ နှုတ်ဆိတ်နေတာကို သီမကြည့်ရက် သလိုဖြစ်လာသည်။ တကယ်တမ်း သီသူ့ကို နာကျင်စေလိုခြင်း မရှိပါလား။ သီတို့ နှစ်ဦးကြားမှာ ရှိနေသည့် ဘူးသီးကြော် ပန်းကန်ကိုသာ သီ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ထိတို့ကစားနေခဲ့သည်။
“နင် တကယ်သေချာ ရဲ့လား သီ။”
သီ့ ဒေါသတို့ ချက်ချင်း ဆူဝေလာပြန်သည်။ နင့်ကိုယ်နင် သိပ်အထင်မကြီး ပါနဲ့ ဖိုးညီ။ မာနတို့ ခေါင်းထောင်လာသည်။ သီ့ ဒေါသကို သူမသိစေရ။ တောင်းပန်သော မျက်လုံးများကို လွှဲဖယ်၍ ထားလိုက်ပြီ။
“နင် ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မယုံတာလား။ ဝေဖန်ချင်တာလား။”
“မမှားစေချင်တာ….ဟုတ်လား။ နင် ငါ့အကြောင်းကို မသိဘဲနဲ့ မဝေဖန်ချင် စမ်းပါနဲ့။”
သီလှောင်ရယ် ရယ်လိုက်မိသည် ထင်၏။ ငါ့ကို မမေးတော့ဘူးလား ဖိုးညီ။ ငါလက်ထပ်မယ့်သူဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ…။ နင်တကယ်ပဲ မသိချင်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် သိရမှာကို ကြောက်နေတာလား။ ငါဟာ အရင်တုန်းက သီ မဟုတ်တော့ဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး မဟုတ်တော့ဘူး။ ငယ်သူငယ်ချင်းက အကြောင်းမကြားဘဲ ခွဲသွားရင် ၀မ်းပန်းတနည်း ငိုကြွေးတော့မယ့် မိန်းကလေး မဟုတ်တော့ဘူး။ ခုနစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ကြီးပြင်းစေခဲ့ပြီ ဆိုတာ နင်သတိမထား မိတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မယုံချင် တာလား။
“အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ယုံကြည်လား သီ။ နင်တခြား တစ်ယောက်ကို မချစ်ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတာ သေချာလား။”
“ငါ ဘယ်သူ့ကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးဖူး၊ ငါ့အချစ်ဟာ ငါလက်ထပ်မဲ့ သူဆီမှာပဲ ရှိတယ်။”
“နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကို အချစ်လို့ မခေါ်နိုင် ဘူးလား သီ။”
သူ့အသံမှာ သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးနေ သလိုပဲဟု သီထင်ချင်သည်။ သီ့စိတ်ထဲမှာ နှစ်ရှည်လများ သိမ်းဆည်းထားသော စကားတို့ တိုးထွက်လာကြသည်။
“အချစ်… ဟုတ်လား။ နင်က အချစ်အကြောင်းကို ဘယ်လောက်များ သိလို့လဲ။ အင်းလေ….လူတိုင်းမှာ သူတို့ နားလည်တဲ့ ပုံစံတိုင်းနဲ့ အချစ်ရှိနေမှာပါ။ ငါ့အတွက်လည်း ငါ့ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ ငါပေါ့။ ဒီမှာ ဖိုးညီ…။ အချစ်ဆိုတာ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို နှုတ်သလို ဆွဲနှုတ်ပစ်လို့ ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပေမယ့် သစ်ပင်တစ်ပင်လို မပျိုးဘဲ ထားရင်သေသွား တတ်တယ်။ အချစ်မှာ ပေးဆပ်လေးနက်ခြင်းတွေ ပါတယ်။ သည်းခံနားလည်မှုတွေ ပါတယ်။ ကိုယ့်မာနကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေ ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ မာနကို တန်ဖိုးထားခြင်း တွေလည်း ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အတ္တနဲ့မာနနှစ်ခုလုံး ပေါင်းဆုံသွားတာပဲ။ တနေ့မှာ အိပ်ယာက နှိုးလာပြီး ချစ်ဖို့သတိရရုံနဲ့ အချစ်ဖြစ်မလာဘူး။”
ထူးဆန်းစွာပင် သီ့ အသံက ငြိမ်သက်လွန်းနေသည်။ သီ ထိုင်ရာမှ ဖြည်းညင်းစွာ ထသည်။
“နင့်ကိုငါ ဖိတ်စာ ပို့လိုက်မယ် ဖိုးညီ။”
အပြန်လမ်းမှာ နှင်းတို့ကွဲလုပြီ။ လင်းကျင်းသော လမ်းကို မြင်နေရသည်။ သီ့စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတော့။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:45 11 comments: